नासु र खरिदारको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ ? थाह पाउनुहोस् यी प्रश्नोत्तर - Everest Dainik - News from Nepal
नासु र खरिदारको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ ? थाह पाउनुहोस् यी प्रश्नोत्तर
लोक सेवा आयोगबाट लिइने सम्भावित विषयगत प्रश्नोत्तरहरुः
१- सामाजिक सुरक्षा भन्नाले के बुझिन्छ ? नेपालमा सामाजिक सुरक्षाका स्थिति उल्लेख गर्दै यसका समस्या र समाधानका उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस् । (२+३+२.५+२.५)
२- आरक्षण र समानुपातिक प्रतिनिधित्वबारे लेख्नुहोस् । (२.५+२.५=५)
याे पनि पढ्नुस उम्मेद्वारले कसरी गर्ने अन्तर्वार्ताको तयारी ?
स्रोत साधन र राज्य संयन्त्रमा सहज पहुँच पुर्याउने कार्य समावेशीकरण हो भने आरक्षण एउटा साधन हो ।
३- सार्वजनिक सेवा प्रवाह भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवा प्रदायकको भूमिकाको बारेमा उल्लेख गर्नुहोस् । (२.५+२.५=५)
सेवालाई जनताको वरिपरि पुर्याउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा अडिग
४- नेपाल सरकारको लेखा प्रणालीका स्वरूपबारे लेख्नुहोस् ।
५ नेपाल सरकारको लेखा प्रणालीका स्वरूपबारे लेख्नुहोस् ।
१- केन्द्रीयस्तरको लेखा
याे पनि पढ्नुस शाखा अधिकृतको तयारी कसरी गर्ने ?
२- कार्यसञ्चालनस्तरको लेखा
५- आन्तरिक लेखापरीक्षण र अन्तिम लेखापरीक्षणबीचको भिन्नता उल्लेख गर्नुहोस् । (२.५+२.५=५)
६- अन्तःशुल्कका बारेमा लेख्नुहोस् । (५)
मानव स्वास्थ्यलाई असर गर्ने र वातावरणमा ह्रास पुर्याउने किसिमका वस्तु तथा सेवाहरूको उत्पादन तथा पैठारीमा लाग्ने कर नै अन्तःशुल्क हो । मदिरा, चुरोट तथा अन्य यस्तै प्रकृतिका वस्तु तथा सेवामा यो कर लाग्ने गर्दछ । नेपालको कुल राजस्वमा यसको योगदान उल्लेखनीय रहेको पाइन्छ ।
७- निजामती सेवाको सकारात्मक र नकारात्मक प्रवृत्तिहरूबारे लेख्नुहोस् । (२.५+२.५=५)
८- नेपालमा बेरोजगारीको समस्या भयावह रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । के कारणले यस्तो समस्या सिर्जना भएको होला ? टिप्पणी गर्दै बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न के गर्नुपर्ला रु आफ्नो सुझावहरू लेख्नुहोस् । (२+४+४=१०)
गरिबी भयो, गरिबीका कारण बचत भएन बचत नहुँदा लगानी हुने कुरा भएन, लगानीको अभावमा उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न सकिन्न ।
उद्योगधन्दा नभएपछि रोजगारी कसरी सिर्जना हुन्छ ?
विदेशी लगानी भित्रिने वातावरण बनाउन हामी चुकिरहेका छाै ।
९- नेपाल सरकारको केन्द्रीयस्तरका कार्यालयले के कस्तो कार्य गर्दछन् ? (५)
नेपाल सरकारको केन्द्रीयस्तरका कार्यालयका रूपमा मन्त्रालय, संवैधानिक अंगहरू विभागहरू र सचिवालयहरू रहेका छन् । यिनले गर्ने कार्यहरूः
१०- केन्द्रीय प्रशासन भनेको के हो ? (५)
नियन्त्रण र निर्देशनसम्बन्धी कार्यहरू गर्ने गर्दछ । राजधानी दैनिकबाट साभार
ट्याग्स: loksewa tayari